Tag: new york | Martech Zone
7 Zvidzidzo Zvekutengesa MuZera reE-Commerce
E-Commerce iri kutora indasitiri yekutengesa neminiti. Zviri kuita kuti zvinyanye kuomarara kuchengetedza zvitina uye matope zvitoro zvifambe. Kune ezvitina-uye-matope zvitoro, hazvisi zvekuchengetedza kumusoro kwehuwandu uye kutonga maakaunzi uye kutengesa. Kana iwe uchimhanyisa chitoro chemuviri, saka unofanirwa kuenda padanho rinotevera. Ipa vatengi chikonzero chinogombedzera kushandisa nguva yavo kuti vauye kuchitoro chako. 1. Ipa Ruzivo, Kwete Zvigadzirwa chete